General - Vaovao momba ny dia | Vaovao momba ny dia (Pejy 4)
Toerana handany Halloween mampatahotra
Mandritra ny fialantsasatra Halloween dia manana toerana maro mampatahotra sy mahaliana isika, miaraka amin'ny angano maizina izay hampatahotra anao indrindra.
Amin'ity lahatsoratra ity dia manome anao toro-hevitra 5 na fika amin'ny fomba hahitana sidina mora vidy kokoa izahay.
Varadero Beach, 140 kilometatra miala an'i Havana, Cuba
Varadero Beach, lazainay anao ny tsiambaratelo rehetra amin'ity faritra tsy mampino ity 140 kilometatra miala an'i Havana (Kiobà) ary hahagaga anao ireo ny mampiavaka azy
Ankafizo ny fialan-tsasatra tsy hay hadinoina ao Grandvalira
Raha tianao ny manao ski, snowboarding, manetsiketsika na fanatanjahan-tena hafa mifandraika amin'ny lanezy, ao Grandvalira dia handany andro tsy hay hadinoina ianao.
Tanàna 5 izay mety tsy misy amin'ny 2100
Androany izahay mitondra anao ny lisitry ny tanàna 5 izay mety tsy misy amin'ny 2100. Azo antoka fa hahagaga anao ny sasany!
Ahoana ny fivezivezena amin'ny biby, pitsopitsony ary fampahalalana
Ny fitsangatsanganana miaraka amin'ny biby dia zavatra ataon'ny olona maro ankehitriny, satria mpikambana ao amin'ny fianakaviana izy io, noho izany dia mila mahafantatra ny fomba anaovany azy ianao.
Ahoana no fomba handaminana ny dia, hevitra fototra
Izahay dia manome anao ny hevitra fototra handrafetana ny dia mahomby, manomboka amin'ny fitaterana mankany amin'ny toeram-ponenana ary amin'ny antsipiriany kely amin'ny toerana haleha.
Tranombakoka Naval sy Aerospace any New York
Eo ambony ilay mpitatitra fiaramanidina USS Intrepid dia ny New York Naval and Aerospace Museum
Jereo ireo toerana majika valo any Espana izay mila sahirana very sy mankafy ny manodidina mahafinaritra.
Sary sokitra hafa tianao ho tsidihina raha mitety an'izao tontolo izao ianao
Tamin'ny lahatsoratra teo aloha, nampahafantarinay anao ireo sarivongana malaza sasany izay hitanay fa "voaro" raha nitety faritra sasany eto amin'izao tontolo izao izahay….
Fitsangatsanganana amin'ireo sary sokitra malaza indrindra sy mahavariana eran'izao tontolo izao
Raha iray amin'ireo mpandehandeha izay te-hivezivezy ianao amin'ny fialan-tsasatra tsotra, mandry amin'ny masoandro ao amin'ny paradisa ...
Agrigento (SICILY): fitsangatsanganana any Gresy taloha
Raha mandeha any Sisila ianao dia tsy halahelo an'i Agrigento, toerana tsy manam-paharoa izay mitovy amin'i Gresy fahiny miaraka amin'ireo tsangambato sy tranombakoka mampino.
Ny fitetezana an'izao tontolo izao dia manana tombony maro izay hahatonga anao ho olona tsara kokoa ary hanatsara ny fahaizanao matihanina. Fantatrao ve ny tombony azo avy amin'ny dia?
Ny tanàna tsara indrindra any Maraoka hitsidika azy
Jereo hoe iza avy ireo tanàn-dehibe ao Maroc rehefa mitsidika ny firenena. Mbola misy maro hafa, fa ireo dia manana toetra mampiavaka azy ireo.
Zoro majika 6 any Galicia
Mitadiava zoro majika vitsivitsy ao Galicia, toerana iray izay mitombo hatrany amin'ny fizahan-tany noho ny zavatra rehetra atolotray.
Ny fiangonana manjombona misy karandoha 40.000
Ianaro ny tsiambaratelo rehetra ao amin'ny Church of 40.000 Skulls, miorina ao an-tanànan'i Sedlec (Repoblika Tseky), toerana tokana sy tsy maintsy jerena
6 amin'ireo efitra mahafinaritra indrindra eto an-tany
Mitadiava efitra efitra enina mahafinaritra indrindra eto an-tany, izay ahafahanao mankafy ny tontolo voajanahary mahavariana sy toerana malalaka.
Ny morontsiraka tsara indrindra any Marseille
Raha te hankafy milomano mamelombelona ao amin'ny torapasika tsara indrindra any Marseille ianao, dia aza adino ny fanangonanay ary mankafiza torapasika nofinofy ao Frantsa.
Ireo tanàna tsara tarehy indrindra any Burgundy, any Frantsa
Isaky ny firenena eropeana dia misy tanàna sy tanàna afovoany miafina izay mbola velona mandraka androany ary toeran-kaleha ...
Sisila, inona no ho hita mandritra ny dia mankany amin'ny nosy
Sisila, nosy italianina ao amin'ny faritr'i Mediterane izay be dia be ny mahita, manomboka amin'ny tanàna mahaliana ka hatrany amin'ny velaran-tany mahavariana toa an'i Etna.
Toeran-kaleha 7 ho an'ny mpankafy tantara
Ny fitsangatsanganana ho an'ireo tia tantara dia manana toeran-kaleha toy ny asehonay anao, hatrany amin'ny piramidan'i Egypt ka hatrany Stonehenge.
Tanàna Espaniola 10 be mpitsidika indrindra
Jereo hoe iza ireo tanàna Espaniola 10 be mpitsidika indrindra araka ny vavahady Kayak, izay miorina amin'ny fikarohana azy ireo hahalalana ireo tanàna malaza indrindra.
Toerana mahafinaritra 7 ho hitanao ihany any Nouvelle Zélande
Mitadiava toerana fito mahavariana indrindra ao Nouvelle Zélande. Toerana majika eo afovoan'ny natiora amin'ny tany feno fifanoherana.
Aveiro, Portioge Venetian indrindra
Aveiro dia fantatra amin'ny anarana hoe Venise Portigey, tanàna kely nefa tena mahaliana, miaraka amin'ireo moliceiros sy lakandrano.
Ny fitsangatsanganana tsara indrindra avy any Nice
Raha mitsidika an'i Nice ianao amin'ity fahavaratra ity, dia aza hadino ireo tanàna mahafatifaty an'ny Riviera frantsay izay manodidina. Efa antitra sy tsara tarehy izy ireo!
Nosy efatra tsy mampino manana endrika mampiavaka an'izao tontolo izao
Ity tontolo ity dia fonenan'ny harena tsy mampino, ny sasany amin'izy ireo dia hijanona miafina raha tsy ny fandrosoan'ny maoderina ...
Ampianarinay anao ny tetika sy ny tsiambaratelo rehetra hividianana any Kambôdza mankafy ny fahafaham-po amin'ny fividianana entana eto amin'ity firenena lehibe ity
Inona no ho vokatr'izany Brexit amin'ny ho avy?
Tamin'ny 23 Jona dia nanao fitsapan-kevi-bahoaka ny Great Britain izay nanohana ny ankamaroan'ny fivoahan'ny firenena ...
Ny fahavaratra no fotoana mety indrindra handraisana io dia nantenaintsika io nandritra ny taona maro. Fitsangatsanganana ...
Raha te hividy ny rakitsoratra sy vinyl tsara indrindra any New York ianao, aorian'ny fanangonana anay, dia hahita ny fivarotana firaketana tsara indrindra any NY ianao.
Ny morontsiraka tsara indrindra any Cádiz handany ny fahavaratra
Miresaka momba ny torapasika tsara indrindra any Cádiz izahay, toerana malalaka hankafizanao ny toetr'andro tsara eto amin'ity faritra Andalusia ity.
Sina: Anjara asan'ny vehivavy, akanjo mahazatra ary fanatanjahan-tena nentim-paharazana
Mianara kely momba ny niandohan'ny kolontsaina sinoa ankehitriny: ny andraikitry ny vehivavy, akanjo mahazatra ary ny sasany amin'ny fanatanjahantena nentim-paharazana.
Fialantsasatra any amin'ny morontsirak'i Amalfi any Italia
Toerana fizahan-tany malaza any Italia ny morontsiraka Amalfi. Miaraka amin'ireo vohitra tsara tarehy izay tsy mahita ny ranomasina avy amin'ny harambato sy toerana ahitanao azy.
Mividiana fanomezana tany New York (I)
Raha te hividy ny fanomezana tany am-boalohany indrindra ianao ao New York, araho ny torohevitray mba tsy ho tara amin'ireo magazay mahaliana sy mahaliana indrindra ao NY.
Ora, vidiny ary fampahalalana hitsidihana ny tranom-bakoka Madame Tussauds
Eto ianao manana ny fampahalalana rehetra ilainao hitsidihana ny tranom-bakoka Madame Tussauds: toerana, vidiny, ora ...
Ny nosy sy morontsiraka tsara indrindra any Malezia
Fanangonana tanteraka amin'ireo nosy sy morontsiraka tsara indrindra any Malezia hahafahanao mamoy ny tenanao amin'ireo morontsiraka fotsifotsy tsy mampino.
Ny boky tsara indrindra hahazoana ny Buddhism
Liana amin'ny kolontsaina bodista ve ianao? Te hahafantatra bebe kokoa momba an'io fivavahana io ve ianao? Eto izahay dia mitondra atiny ho anao miaraka amin'ireo boky tsara indrindra momba ny Bodisma.
Festivities 10 any Galicia mandritra ny fahavaratra izay tsy tokony hotadiavina (II)
Mitadiava fety hafa any Galicia izay mendrika hankafy amin'ity fahavaratra ity. Fankalazana Gastronomika, mahafinaritra ary amin'ny tsiro rehetra.
Festivities 10 any Galicia mandritra ny fahavaratra izay tsy tokony hotadiavinao (I)
Jereo ny festival folo tsara indrindra any Galicia mandritra ny fahavaratra. Festivities feno anecdotes, tany am-boalohany ary mahafinaritra be.
Ny tantaran'ny Morro de San Juan any Puerto Rico
Tantaran'ny Morro de San Juan de Puerto Rico, ny manda espaniola mahavariana misy 400 taona mahery ary naharitra fahirano maromaro.
Venise, miantsena amin'ny tanànan'ny lakandrano
Raha te-hiantsena any Venise ianao dia aza adino ny mpitari-dalana feno anay mba tsy hihoaranao ny zoron'ny tananan'ny lakandrano.
Valan-javaboary an-tanàn-dehibe 5 tsy azo lavina any Espana
Ny lohataona no vanim-potoana mety indrindra hankafizana mandehandeha amin'ireo valan-javaboahary an-tanànantsika. Maneho ny havokavoka maitso ...
Toerana tora-pasika mora vidy ao Espana
Ny fitadiavana toerana mora amoron-dranomasina any Espana dia mora. Lazainay aminao ny toerana fivelomana dimy mahafinaritra any amin'ny morontsiraka Espaniola.
Ny tanàna 5 miloko indrindra eto an-tany
Atolotray anao ny dimy amin'ireo tanàna maro loko indrindra eto an-tany, miaraka amin'ireo trano mahatalanjona nolokoana loko mamirapiratra izay nanjary nalaza be.
Ireo valan-javaboary tsara indrindra any Etazonia
Fifanarahana amin'ireo valan-javaboary tsara indrindra any Etazonia miaraka amin'ny famaritana sy toerana ahafahanao manomana ny vakansy any Etazonia
Andy Warhol sy Louise Bourgeois ao amin'ny tranombakoka Guggenheim
Azonao an-tsaina ve fa ao amin'ny tranombakoka iray ihany dia misy fampirantiana mpanakanto mahafinaritra? Ankafizo ny sanganasan'i Luise Bourgeois sy Andy Warhol ao amin'ny tranombakoka Guggenheim.
Te hahafantatra ve ianao hoe aiza ny ranomasina afovoan-tany indrindra? Aza adino ny fanangonanay hahafantatra bebe kokoa momba ny ranomasina anaty
Inona avy ireo tranombakoka 20 be mpitsidika indrindra eto amin'izao tontolo izao?
Araka ny tatitra isan-taona TEA / AECOM Theme Index sy Museum Inde, izay mandinika isan-taona ny angon-drakitra tranom-bakoka sy ...
Mykonos, nosy grika feno zoro mahafinaritra
Ny nosy Greek of Mykonos dia toerana mety amin'ny fialan-tsasatra, miaraka amoron-dranomasina, fety, tranombakoka ary ireo trano mahazatra Mediteraneana.
Ny marathon tena liana sy mitaky be indrindra eran'izao tontolo izao
Ny fihazakazahana dia nanjary tranga sosialy tato anatin'ny taona vitsivitsy. Fanatanjahantena tonga ...
Nahazo mari-pankasitrahana Tripadvisor Travel'ChoiceTM 2016 i Espana
Isan-taona, ny tranonkala fandrindrana ny dia sy ny famandrihana tranonkala dia manome ny mari-pankasitrahana ny Wisatawan'ChoiceTM ho an'ny toerana mahaliana…
Mandehandeha any amin'izay itondran'ny mozika anao
Mandehandeha any amin'izay itondran'ny mozika anao: manomboka amin'ny festival ka hatramin'ny festival any amin'ny tanàna sasany any Espana.
Mitadiava tora-pasika nudist dimy tsara any Espana hanehoana ny voajanahary indrindra. Sehatra eo afovoan'ny natiora miaraka amin'ny tontolo voajanahary tsara tarehy.
Ny fonjan'i Count of Monte Cristo dia any Marseille
Jereo ny tsiambaratelon'ny fonjan'i Count of Monte Cristo, toerana iray voahodidin'ny rano izay tsy maintsy tsidihinao amin'ny dianao mankany Marseille any Frantsa.
Tanàna 5 toa nalaina avy amin'ny tantaran'i Disney
Eto amin'izao tontolo izao isika dia afaka mahita toerana misy hatsarana tsy mahazatra, toy ireo tanàna 5 ireo izay toa nalaina avy amin'ny tantaran'i Disney.
Zavatra 10 no jerena ao Lisbonne
Betsaka ny zavatra azo jerena ao Lisbonne, renivohitra feno tantara, miaraka amin'ny manodidina sy kanto ary tsangambato maro.
Ny zava-mahatalanjona 7 voajanahary eto an-tany
Fantaro ireo zava-mahatalanjona voajanahary 7 eto an-tany, nofidian'ny latsa-bato malaza, miaraka amin'ny toerana tsy mampino izay tsy maintsy jerena.
Toerana 8 fitsidihana voalohany any Kroasia
Betsaka ny toerana tokony hitsidihana an'i Kroasia, manomboka amin'ny valan-javaboary voajanahary misy riandrano ka hatrany amin'ny vohitra antonontany sy amoron-dranomasina hafakely.
Toetra manintona sy hetsika any India
Jereo ny toerana tsara indrindra sy ny hetsika azonao zahana any India, toerana mahagaga sy manintona tsy manam-paharoa izay ho tadidinao mandrakizay. Fantatrao ve izay?
Ny morontsiraka Blue Flag dia misy ny serivisy sy kalitao tsara momba ny tontolo iainana, ary holazainay aminao ny momba ny sasany any Espana.
Zavatra 7 tokony hatao any Mallorca
Mitadiava zavatra ilaina fito hatao ao Mallorca, nosy iray izay tsy mihoatra ny morontsiraka sy ny lava-drano fotsiny izay misy rano mangarahara.
Kastily 5 any Espana izay tokony hotsidihinao
Ny sasany amin'ireo toerana notsidihina sy notadiavin'ny mpizahatany be indrindra rehefa mizotra amin'ny tanàna mbola tsy ho hitan'izy ireo ...
Ireo zavatra ilaina hita any Istanbul
Tanàna tena mahaliana hitsidika i Istanbul, miaraka amin'ireo toerana mahaliana toa an'ireo moskea na ny Grand Bazaar misy vokatra mahazatra.
Ny làlana portogey mankany Santiago
Ny làlana portogey ao amin'ny Camino de Santiago no faharoa notanterahina taorian'ny frantsay, ary ampahany amin'i Tui, atsimon'i Galicia.
Ny morontsiraka tsara indrindra any Amerika Afovoany
Jereo ny morontsiraka tsara indrindra any Amerika Afovoany izay ahitanao paradisa masoandro sy ranomasina. Fantatrao ve ny morontsiraka rehetra any Amerika Afovoany?
Zavatra tokony ho hita raha mankany Egypt isika
Jereo hoe iza avy ireo fitsidihana lehibe indrindra raha mankany Egypt ianao. Toerana feno tantara sy toerana tsy mampino toa ny tempoly sy piramida.
Fitsangatsanganana literatiora mamakivaky an'i Eropa
Androany, ho fanomezam-boninahitra ny andro izay mahaliana antsika, Andro Book, ary tsy manao ambanin-javatra ny fialam-boly mandeha, ...
Toerana 6 mora vidy any Eropa
Mitadiava toerana enina mora vidy any Eropa, tanàna manintona enina izay be tolotra ary ambany ny tetibola.
Jereo ireo zavatra tena ilaina hitanao ao amin'ny tanàn-dehibe Porto any Porto, manomboka amin'ireo orinasa mpamokatra divay ka hatrany amin'ny fivarotam-boky tsara tarehy indrindra.
Zavatra 5 tokony hatao ao Edinburgh, tsy maintsy atao
Jereo ny zavatra dimy tsara indrindra tokony hatao ao amin'ny tanànan'i Edinburgh any Scottish, hankafizanao ny kolontsaina sy ny tsangambato.
Ny tanànan'i Bruges any Belzika dia toerana feno hatsaran-tarehy antonontonony. Jereo hoe inona no ho hitanao sy ny fomba hahatongavana any amin'ity tanàna eropeana mahafinaritra ity.
Raha efa nitsidika faritra tsara amin'ny tranombakoka malaza indrindra ianao izay hita ao amin'ny torolàlana momba ny dia rehetra, tsia ...
Zavatra 20 tokony hatao raha tonga any Galicia (II) ianao
Mitadiava zavatra maro hafa tokony hatao raha mitsidika an'i Galicia ianao, any avaratry Espana. Toerana feno fomban-drazana sy toerana tsy manam-paharoa.
The Cells, fampirantiana avy amin'i Louise Bourgeois ao amin'ny tranombakoka Guggenheim any Bilbao
Te hankafy fampirantiana ve ianao? Tsidiho ny tranombakoka Guggenheim any Bilbao ary jereo ny Las Celdas, nosoratan'ilay mpanakanto Louise Bourgeois. Hahagaga anao izany.
Zavatra 20 tokony hatao raha tonga any Galicia (I) ianao
Betsaka ny zavatra azo atao raha tonga any Galicia ianao. Tadiavo ireo zavatra 20 tsy azo hadino amin'ny fitsidihanao ity vondrom-piarahamonina ity.
Formula fito hitety an'izao tontolo izao rehefa miasa
Tsy ny fialan-tsasatra ihany no fomba hahitana an'izao tontolo izao ary tsy voatery ho tahiry be loatra no hitahiry vola ...
Raha mbola tsy nandeha tany amin'ny Fair Fair tany Seville ianao dia lazaiko anao fa iray amin'ireo zavatra ireo ...
Ny morontsiraka 10 mahaliana indrindra eran'izao tontolo izao (II)
Manohy ny morontsiraka be fahalianana indrindra eto an-tany izahay. Miresaka momba ny morontsiraka misy sarivongana isika, misy vatokely na hantsana mahatalanjona.
Parla morontsiraka any Madrid
Iza no nilaza fa tsy misy moron-dranomasina any Madrid? Jereo ny morontsirak'i Parla ary fantaro ny fandaharam-potoana, ny vidin'ny tapakila ary ny fomba hahatongavana any.
Ny morontsiraka 10 mahaliana indrindra eran'izao tontolo izao (I)
Jereo ny morontsiraka 10 mahaliana indrindra eto an-tany. Tendrombohitra fasika miloko, miaraka amin'ireo mpanofa mampihomehy na fananganana vatolampy mahatalanjona.
Ella, ny tsara indrindra any Sri Lanka (ampahany I)
Any amin'ny distrikan'i Badulla (faritanin'i Uva) no misy azy ary 1050 metatra ambonin'ny haavon'ny ranomasina no misy azy. Mifandray amin'i Colombo sy Kandy (tanàna lehibe ao amin'ny firenena)
Jereo ity fitsangantsanganana an-tsambo mahavariana ity mamaky ny zaridaina sy ny farihin'i Xochimilco, toerana fizahan-tany izay tena mendrika hitsidika an'i Mexico.
Fa maninona no misy dragona eo amin'ny sainan'i Wales? Lazainay aminao ny tantara ao ambadiky ny tandindon'ny vahoaka Welsh. Inona no dikan'izany? Jereo!
Zavatra 8 ho hita sy hatao any Amsterdam
Ny tanànan'i Amsterdam dia manana toerana mahaliana indrindra ho hita, toy ny Distrika Jiro Mena na ireo kianja malaza. Fitsidihana mahaliana iray amin'ny tanàna eropeana.
Zavatra 10 tokony hatao any Venise
Mampiseho aminao zavatra ilaina folo hatao any Venise izahay rehefa mitsidika ny tanànan'ny lakandrano, mba tsy hisy tsy ho zava-dehibe.
Zavatra maimaimpoana 7 ho hita ao Seville
Seville, ireo andro manokana amin'ny Herinandremana Masina, dia lasa iray amin'ireo tanàna be mpitsidika indrindra any Espana, ho an'ny ...
Ny morontsiraka fasika mainty 8 mahavariana indrindra
Jereo ny morontsiraka fasika mainty mahatalanjona indrindra eto an-tany. Ireo torapasika izay matetika avy amin'ny volkano dia mamorona sary mahavariana.
El Pedraforca, tandindon'i Catalonia
Pedraforca dia tendrombohitra iray any amin'ny faritr'i Beguedá (faritanin'i Barcelona) ary ao Serra del Cadí, ao amin'ny Catalan Pre-Pyrenees.
Ny masin'ny fahamarinana ao Pattaya
Ampianarinay anao ny tsiambaratelo rehetra momba ny Toerana Masin'ny Fahamarinana any Pattaya: isan'ny efitrano, fiaviana ary filôzôfia an'ity tempoly tokana eto an-tany ity.
Torapasika sardinia 5 hankafizinao amin'ny fialan-tsasatra
Nahita tora-pasika mahafinaritra dimy tany Sardinia izahay izay tena paradisa any Mediterane hankafy ny fialantsasatra.
Toerana 10 mahavariana eran'izao tontolo izao
Asehonay anao ny toerana 10 mahaliana na ilaina hitety an'izao tontolo izao. Iza amin'ireo no tadiavinao indrindra?
Làlan'ny fizahan-tany ho an'ireo tia literatiora
Raha herinandro vitsivitsy lasa izay dia nanolotra sarimihetsika 10 taminao izahay, izay ny fahitana azy ireo fotsiny dia nahatonga anao haniry handeha amin'ireo toerana mahafinaritra ireo ...
Ny tsara indrindra any Ekoatera: Pailón del Diablo
Pailón del Diablo dia riandrano eo amin'ny renirano Pastaza, any amin'ny Ecuadorian Andes akaikin'ny tanànan'i Baños de Agua Santa
Miasa eo ambony sambo fitsangantsanganana: safidy tsara ve izany?
Te hiasa amin'ny sambo fitsangantsanganana ve ianao ary tsy fantatra hoe ahoana? Azavainay ny mahatsara sy maharatsy ny asa fivelomana amin'ny sambo fitsangantsanganana.
Ireo fahatsiarovana mahazatra an'i Sina
Manomana ny dianao any Shina? Jereo ny souvenir sinoa 7 mahazatra indrindra, fanomezana mahafinaritra hahagaga ny namanao sy ny fianakavianao.
Tsangambaton'ny lova 20 eto Espana (I)
Any Espana dia misy tsangambato maro izay nambaran'ny UNESCO ho vakoka manerantany ary mendrika tsidihina.
Goavana tokoa izao tontolo izao ary malalaka be ny tsiron'ny olona. Avy amin'io fahasamihafana misy eo amin'ny hevitra io, ny mpandeha dia mifidy ...
Ny fampiharana tsara indrindra amin'ny dia
Jereo ny Apps tsara indrindra hitety, avy amin'ny apps hahitanao sidina mankany amin'ny hafa mba hanampiana anay any amin'ny toerana itodiana, mitady toerana hitsidika.
Toerana tsy tokony halainao any Jordania
Asehonay aminao toerana dimy izay tsy tokony halainao amin'ny dia mankany Jordania, anisan'izany ny Petra na ny Ranomasina Maty. Mbola misy maro hafa koa!
Fantatrao ve hoe iza ireo farihy manan-danja indrindra any Panama? Ho hitantsika hoe iza no tsara indrindra ary inona no tokony hoentinao amin'ny fitsidihanao an'ireo toerana mahavariana ireo.
Torolàlana hitsidika ny Fallas of Valencia: toro-hevitra vitsivitsy
Raha tsy ela dia hankafy ny herinandro masina isika, na dia ela kokoa aza dia afaka mankafy ny Fallas of Valencia, ...
Inona avy ireo motera fikarohana momba ny dia tsara indrindra
Rehefa handeha hanao dia isika, na amin'ny fialam-boly na amin'ny asa aman-draharaha, dia manao dingana mitovy hatrany: Mamily ny ...
Minneriya dia iray amin'ireo valan-javaboary lehibe indrindra any Sri Lanka. Any amin'ny faritany avaratra-afovoan'ny firenena no misy azy ary 9000 ny velarany
Ny tanànan'i Milan dia manana tsangambato mahafinaritra sy toerana maro hitsidika azy, koa mety ho toerana fizahan-tany tsara izany.
Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao mba hanaovana ny Interrail
Tanora maro no manomboka ny fandaharam-pianarany manao dia lavitra manao ny Interrail malaza any Eropa mandritra ny fialantsasatra fahavaratra. Fotoana tonga lafatra…
Dia an-tsitrapo ho an'ny tanora
Raha te hanao hetsika an-tsitrapo any ivelany foana ianao nefa tsy sahy nanao an'izany, angamba ity ...
Kolontsaina sy fomban-drazana Indoneziana
Hitanay ny fomba amam-panao mahazatra any Indonezia. Antoko, fivavahana, fitafiana, gastronomie ary maro hafa. Aza adino ny kolontsaina indoneziana.
Antony fitsangantsanganana irery
Ny fampiharana ny fahatsoram-po avy amiko, aminareo mpamaky, dia holazaiko fa tsy dia fantatro loatra raha manoratra aho ...
West Coast of Ireland, dia fitsangatsanganana ilaina (II)
tapany faharoa amin'ny diako mankany amin'ny morontsiraka andrefan'i Irlanda. Raha nankany amin'ny Cliff of Moher aho tamin'ny andro voalohany, dia nankany avaratra foana ny andro manaraka
Zavatra 7 tokony hatao amin'ny dia any Aostralia
Asehonay aminao ny zavatra ilaina hita sy atao mandritra ny dia mankany Aostralia, manomboka amin'ny fahitana biby toa ny koala ka hatramin'ny fitsidihana an'i Uluru ao afovoan-tany.
Jereo ny toerana tsara indrindra hankafizana ny fiainana amin'ny alina any Bangkok sy ny bara na klioban'ny pelaka ao an-tanàna.
Raha tamin'ny andro iray izay dia nilaza taminay ny tanjona dimy voalohany amin'ny 2016 izahay araka ny Lonely Planet, anjaranao izao ...
West Coast of Ireland, dia fitsangantsanganana ilaina (I)
tapany voalohany amin'ny zotra izay nataoko teny amin'ny morontsiraka andrefan'i Irlandy, ny morontsiraka Atlantika, tamin'ny fiara. Faritra ahitana sary miavaka tsy mampino. Irlandy tena izy.
Toerana 10 tsara indrindra amin'ny 2016 araka ny Lonely Planet (I)
Azo antoka fa fantatrareo Lonely Planet, iray amin'ireo mpanonta mpitety faritany tsara indrindra eran'izao tontolo izao, miaraka amin'ny mpitari-dalana ka ...
Ny nosy 10 tsara indrindra any Eropa hankafizin'ny masoandro
Tianay ny mahita ny vazan'izao tontolo izao amin'ny laharana izay ahitantsika ireo toerana mangatsiatsiaka indrindra. Misy aminay sisa tavela ...
Ny tena fo mahery fo: William Wallace any Stirling, Ekosy
Hitanay ny Monument National Wallace, tilikambo mahavariana naorina ao Stirling (Ekosy) ho fanomezam-boninahitra an'i William Wallace.
Mpandeha karazana inona ianao?
Izaho, izay mazàna rehefa mivezivezy dia ataoko mba "hanomezana sakafo" ny zavatra niainako, tena mandinika aho amin'ny sisa amin'ny ...
Gulhi dia nosy kely misy kilometatra vitsivitsy miala ny renivohitry ny firenena Malé sy ny faritra atsimon'ny Kaafu Atoll. Mponina latsaky ny 1000.
Izay rehetra nanontany tena anao momba ny El Retiro Park
Miaraka amin'ny 125 hektara sy hazo maherin'ny 15.000, ny El Retiro Park dia fialofana fandriam-pahalemana ao ...
Moa ve tia miantra sa mampidi-doza amin'ny olombelona ny panda? Jereo ny tsiambaratelo rehetra an'ity biby aziatika mahazatra ity izay atahorana ho lany tamingana.
I Palmyra dia nambara fa Toerana Lova Iraisam-pirenena tamin'ny taona 1980. Any afovoan'ny tany efitra sy eo akaikin'ny oasis no iray amin'ireo tavela arkeolojika manan-danja indrindra izay mbola voatahiry.
Torolàlana hiaina karnavaly any Galicia
Eny, efa fantatsika fa raha miresaka karnavaly isika dia matetika no mieritreritra an'ireo any Rio de Janeiro, ary kely kokoa ...
Jereo ny akanjo fanaon'ny vehivavy any Mexico, ny akanjo sy akanjo fanao mahazatra, maoderina na manokana ho an'ny fety.
Fantatrao ve ireo lohasaha 10 manandanja indrindra eto an-tany? Aza adino ireny toerana mahatalanjona ireny sy ny tsiambaratelo nafeniny ho an'ireo mitsidika azy ireo.
Amin'ity abidia mpandehandeha (II) ity, ny farany amin'ity fizarana ity, dia hitsidika ireo tanàna angano toa an'i Roma, Paris na Seville isika ... Hijanona hahita azy ireo ve ianao?
Ny Algarve dia manana moron-dranomasina mahafinaritra eo amoron'ny morony. Lazainay aminao hoe iza no morontsiraka tsara indrindra eto amin'ity faritra atsimon'i Portugal ity hitsidika azy.
Lipton's Seat, ny dite oliva any Sri Lanka. Iray amin'ireo fambolena dite manandanja indrindra eto an-tany. Mpanamboatra karazana dite rehetra.
Florence, tanàna feno zavakanto
I Florence dia iray amin'ireo tanàna italiana malaza indrindra, toerana misy zavakanto sy tantara eny an-dalambe. Jereo ny fitsidihana tena ilaina izay tsy maintsy hitanao.
Ilay Liona Matory, misitrika any amin'ny Nosy Galapagos
Ny Sleeping Lion (na Kicker's Rock amin'ny teny Anglisy) dia nosy tsy misy mponina kilometatra vitsivitsy miala ny nosin'i San Cristóbal
Mangatsiaka be: fialantsasatry ny ririnina any Norvezy
Norvezy dia iray amin'ireo tanjona ririnina mampientanentana indrindra sy mahatalanjona, miaraka amin'ny fjords manaitra, ny fitsangantsanganana an-tsokosoko ary ny jiro avaratra.
Akanjo nentin-drazana Kambôdza
Raha mikasa ny ho any Kambodza ianao dia mahaliana fa fantatrao ny akanjo sy akanjo mahazatra an'io faritra io. Ahoana ny fomba fitafiany any Kambodza? Jereo.
The Eiffel Tower, sariohatr'i Frantsa
Ny The Eiffel Tower, tsangambato lasa sary famantarana an'i Frantsa sy Paris, manana tantara sy fahalianana maro ho fantatra.
Fizahan-tany any Afrika
Atorinay anao ireo firenena 11 manana fizahan-tany be indrindra eto Afrika, inona no mampiavaka azy tsirairay ary inona avy ireo tanàna manan-danja ao Afrika afeniny?
Ny katedraly tsara tarehy indrindra any Espana
Jereo ny katedraly tsara tarehy indrindra any Espana, izay maneho ny fomba sy ny vanim-potoana samihafa, fa manana ny hatsarany manokana, ny tantarany ary ny tsiambaratelony.
Ny Quilotoa, voahangy an'ny Andes Ecuador
Ny Quilotoa dia volkano Ekoatera iray ary ny vava volkano dia nanangona ilay antsoina hoe farihy volkano. Iray amin'ireo farihy volkano mahavariana indrindra eto an-tany.
Metro de Madrid, sombiny kely amin'ny Tantaranay
Metro de Madrid dia fitaovana fitaterana fotsiny. Ampahany amin'ny tantaran'i Madrid izy io ary koa tranombakoka aza. Lazainay aminareo rehetra momba azy ity lahatsoratra ity.
Drafitra kolontsaina hafa 5 ho an'ny Krismasy any Madrid
Ny Krismasy dia fotoana mety hankafizanao ihany koa ireo drafitra ara-kolontsaina izay tsy misy ifandraisany amin'ireo fialantsasatra maha-te ho tia ireo. Aza adino izy ireo!
Ny Parthenon any Athens dia tandindon'ny maha-zava-dehibe ny tontolon'ny Grika taloha. Tempoly mahatalanjona manana tantara maro sy fahalianana ho fantatra.
Indray andro ao amin'ny foibe famokarana nokleary Chernobyl sy Prypiat, mijanona mandritra ny adiny 2 amin'ny fiara avy any Kiev, renivohitr'i Ukraine. Fizahan-tany momba ny nokleary sy tantara.
Ny tanànan'i Santiago de Compostela dia manana ny Katedraly mahafinaritra miaraka amin'ny façade Obradoiro, saingy mihoatra lavitra noho izany ny an'ny mpivahiny.
Chernobyl, andro iray ao amin'ny toby famokarana angovo nokleary (ampahany I) - Fiomanana
Toerana hankalazana ny Taom-baovao 2015
Jereo ny toerana tsara indrindra hankalazana ny Taom-baovao 2015. Fomba hafa sy manokana hankafizana ny fahatongavan'ny taona vaovao.
Zavatra tokony hatao amin'ny dia any Sydney
Ny fitsangatsanganana any Aostralia dia mandalo traikefa nahafinaritra tao an-tanànan'i Sydney. Ity tanàna ity dia mihoatra lavitra noho ny Opera malaza, tadiavo ny hatsarany.
Asehonay anao ny folo amin'ireo lapa tsara tarehy indrindra eran'i Eropa. Safidin'ny trano mimanda tena mahaliana, miaraka amin'ny tantara sy kitroka maro.
Fetibe sy fomban-drazana any Thailand
Lazainay aminao ny momba ny fomba amam-panao any Thailand. Ahoana no fomba fifampiarahabana azy ireo na antoko inona no ankalazaina eto amin'ity firenena Aziatika ity? Aza adino izany satria hahasarika ny sainao izany.
Zava-misy sy fampahalalana momba an'i Eropa
Lazainay aminao ny tena zava-misy momba an'i Eropa: tantara, jeografia, fiteny, fitsangatsanganana ao anatin'ny Vondrona eropeana ary zava-misy mahaliana. Aza adino izany.
Firenena iza no nofinofisinay hivezivezy amin'ny 2016?
Ny fampitahana ny sidina sy ny trano fandraisam-bahiny Skyscanner dia nanatanteraka fandalinana tamin'ny toerana mafana folo ho an'ny 2016. Jereo eto izy ireo!
Ny zava-mahatalanjona vaovao 7 amin'ny tontolo maoderina
Jereo ny zava-mahatalanjona fito vaovao amin'ny tontolo maoderina. Safidy nofidina tamin'ny alàlan'ny fifidianana ny tsangambato manan-danja indrindra ankehitriny.
Ny tsara indrindra any atsimon'i Arzantina
Jereo ny toerana manintona mpizaha tany tsara indrindra any atsimon'i Arzantina sy ireo toerana tsy manam-paharoa amin'ity faritra ity izay feno fahagagana ho an'ireo mpandeha indrindra.
Tantara sy toetra mampiavaka ny Colosseum Romana
Lazainay anao rehetra ny momba ny Colosseum any Roma, fantatra ihany koa amin'ny hoe Amphitheater Flavian. Aza adino ny antsipiriany momba ity zavatra tsy maintsy hita any Italia ity
Hitanay ny zava-drehetra momba an'i Shina: tantara, kolontsaina, jeografia, fisarihana ary zoro izay tsy azonao adino amin'ny dianao mankany amin'ny firenena Aziatika
Nanova ny fomba fanaovana fizahantany ny krizy. Ny fizarana mpitsangatsangana dia zava-dehibe amin'ny sehatry ny sehatra sy amin'ny fisafidianana namana mpiara-dia. Mpandeha karazana inona ianao?
Jereo ny lanezy any Sierra Nevada ary ankafizo ny toeram-pialan-tsasatra mahafinaritra sy feno.
Ny toerana be ranomandry malaza indrindra any Espana
Jereo ny toerana be ranomandry malaza indrindra any Espana. Avy any avaratra sy atsimo dia misy toeram-pisakafoanana ski hankafizanao ny lanezy sy ny fanatanjahan-tena ao aminy.
Ireo disko sy klioba tsara indrindra any New York
Jereo ny klioba tsara indrindra any Etazonia miaraka amin'ity lisitr'ireo klioba tsara indrindra any New York ity. Mandany alina tsy mampino amin'ireo klioba ireo.
Jereo ny fito amin'ireo trano mimanda tsara indrindra any Espana. Andiana trano mimanda sy lapan'ny hatsaran-tarehy lehibe amin'ny endrika samy hafa miresaka momba ny tantara.
Mandehandeha amin'ny zotra Ebro ary ankoatra ny fahitana ny endrika mahafinaritra, dia afaka manandrana ny divay Rioja tsara indrindra ianao ary manao fanjonoana ara-panatanjahantena.
Ho hitantsika ireo volkano tsy mampino indrindra any Amerika Avaratra, toerana velona sy tsy manam-paharoa izay hamela anao hanana vava malalaka.
Ireo firenena mampidi-doza indrindra amin'ny fizahan-tany
Ny minisiteran'ny raharaham-bahiny dia nanangana lisitr'ireo firenena mampidi-doza indrindra amin'ny fizahan-tany. Raha handeha hitsangatsangana tsy ho ela ianao dia jereo eto.
Antony hahitana an'i Galifornia any Galicia
Galifornia dia teny izay mamaritra ny faritra amoron-dranomasina sy fahavaratra indrindra any Galicia. Toerana feno faritra fasika tsara tarehy sy zavatra maro ankafizina.
Mividiana pashminas any India
Hildene, fonenan'ny Lincoln ao Vermont
Hildene dia tranobe any Vermont izay tranon'ny fianakavian'i Lincoln ary tranombakoka ankehitriny
Castle an'i Montalegre, any Portugal
Ny Castle Montalegre dia iray amin'ireo trano mimanda taloha any Portugal
Torohevitra sy tolo-kevitra momba ny dia mankany Kroasia (IV)
Raha mandritra ny fialan-tsasatrao manaraka dia handeha ho any Kroasia ianao, eto ambany dia manome anao toro-hevitra sy toro-hevitra ianao hahafahanao manomana ny dia
Ireo stationery voalohany indrindra any New York
Raha mpankafy ny zava-drehetra mifandraika amin'ny taratasy sy penina ianao, dia manolotra anao ny lisitry ny sasany amin'ireo fivarotana fitaovam-pitaterana tsara indrindra eto an-tanàna.
Haulover Beach, ny morontsiraka miboridana tsara indrindra any Miami
Haulover Beach no morontsiraka miboridana tsara indrindra any Miami ary iray amin'ireo tsara indrindra eran'izao tontolo izao
Ny oniana dia fandroana lohataona mafana an'ny Japoney
Ny mari-pamantarana iray dia hanome lanja ny fepetra napetrak'ireo orinasa, kely kokoa noho ny amin'izao fotoana izao ho an'ny valizy.
Ny playa de los Muertos tsara tarehy dia morontsiraka nudist any Almería
Tsidiho ny Chantilly sy ny ohariny, any Frantsa
Chantilly dia kaominina frantsay cradle of the Chantilly cream ary tompon'ny hatsarana hafa
Praia da Ursa, any Portugal
Praia da Ursa dia amoron-dranomasina any S9intra, Portugal
Ny morontsirak'i Taiwan, paradisa any Azia
Taiwan dia manana morontsiraka tsara tarehy maro
Isshiki, tora-pasika imperialy akaikin'i Tokyo
Any akaikin'i Tokyo dia misy moron-dranomasina ampiasain'ny amperora, Isshiki Beach
Ilay lava-bato Búri mahafinaritra, Islandy
Ny Cave Búri no lava-bato farany hita tany Islandy, tamin'ny 2005
Ilay tanàna Vilarinho da Furna izay rendrika
Ny tanànan'i Vilarinho da Furna izay rendrika dia any Portiogaly ary nalentika nandritra ny efapolo taona
Fitrandrahana sira, tionelina, lamasinina ary maro hafa ny berchtesgaden
Ny Berchtesgaden Salt Mines dia misokatra ho an'ny besinimaro ary mpizahatany tokoa
Hotel W Hong Kong, kanto ary fahitana tsara
Ny W Hotel dia iray amin'ireo trano fandraisam-bahiny lafo vidy ao Hong Kong miaraka amin'ny fahitana tsara indrindra ny tanàna
Trano fandraisam-bahiny 5 ambany trano mora indrindra
Lisitr'ireo trano fandraisam-bahiny dimy ambany indrindra amin'ny fahavaratra 2015
Ny fanatanjahan-tena dia zavatra miorim-paka ao Wales toa ny baolina kitra, rugby, cricket, snooker, sns., Zavatra hitaona olona an'arivony.
Raha mandeha any New York ianao dia mikasa ny hampitombo ny firaketana an-tsoratra dia manolotra anao ny sasany amin'ireo magazay tsara indrindra ao amin'ity sehatra ity
The Church of Our Lady of the Rocks, any Montenegro
Any Perast, Montenegro, dia misy nosy artifisialy ary eo amboniny dia ilay fiangonana kely an'ny Our Lady of the Rocks
Raha te-hividy akanjo any New York ianao; etsy ambany, manolotra lisitra anao izahay miaraka amin'ireo fivarotana fitafiana tsara indrindra
Portugal dos Pequeñitos dia valan-javaboary efa an-jaza taloha any Portugal
Ny sisa tavela amin'i Conímbriga, any Portugal
Conímbriga dia toerana arkeolojika rava romanina any Portugal
Te Tiare Resort, fialofana any Polinezia
Ny Resort Te Tiare dia trano misy bungalow any amin'ny nosy Huahine, any Polinezia
Ny fivarotana kosmetika tsara indrindra any New York (I)
Raha mieritreritra ny hividy kosmetika ianao mandritra ny fotoana ijanonanao any New York; Avy eo lazainay aminao hoe iza no fivarotana tsara indrindra amin'ity karazana ity
Ny fivarotana sôkôla tsara indrindra any New York
Ho fanampin'ny fivarotana akanjo an'arivony, any New York, ny mpizahatany dia ho afaka hahita fivarotana sôkôla maro
3 voalohany amin'ny firenena tsara indrindra misy ny tsena krismasy
Il Porcellino, ilay lambo tsara vintana any Florence
Sarivongana vintana kely an'i Florence dia sarivongana varahina kely antsoina hoe Il Porcellino
Tsy azo apetraka any Venise intsony ny hidim-pitiavana
Any Venise, vao nisy fandraisana andraikitra iray nipoitra mba hamaranana ny lamaody fametrahana ny hidim-pitiavana amin'ireo tetezana malaza indrindra eto an-tanàna
Ny morontsiraka mahafinaritra an'i Miramar, any Portugal
Ny moramora Miramar dia folo kilometatra monja miala ny tanànan'ny Porto, any Portugal, ary torapasika malaza be
Fahatsiarovana an'i White Rose any Munich
Any Munich dia misy tsangambato maotina iray izay matetika no tsy voamariky ny ankamaroan'ny mpizahatany: ny Weiße Rose (ilay White Rose).
Ny trano mimanda ao Carcassonne, nofinofy medieval any Frantsa
Ny Citadel medieval an'ny Carcassonne dia iray amin'ireo toerana lovambe manerantany ao Frantsa
Toeram-pizahantany ao Ivory Coast
Inona no azonao atao sy tsidihana any Ivory Coast
Ny Statue of Liberty dia nambara ho toerana misy ny vakoka manerantany tamin'ny taona 1984. Misy resaka momba ny tandindony.
Fasan'i Oscar Wilde any Paris
Ny fasana Pére Lachaise dia iray amin'ireo toerana be mpitsidika indrindra ao Paris, satria ireo olo-nalevina tao dia nifaninana tamim-pankasitrahana tamin'ilay malaza izay nipetraka tao amin'ny Pantheon mihitsy. Iray amin'ireo mpilalao ireo ny poeta malaza Irlandey sy mpanoratra Oscar Wilde. Ary mendrika hitsidika azy ny fasany.
Tantara sy curiosities an'ny Copenhagen Mermaid
La Sirena, dia iray amin'ireo tsangambato be mpitsidika indrindra any Copenhagen ary manolotra tantara tena hafahafa sy andianà fahalianana
Punaluu, morontsiraka fasika mainty any Hawaii
Punaluu Beach, morontsiraka fasika mainty eo amin'ireo morontsirak'i Hawaii
Narada Resort & Spa, any Sanya
Narada Resort & Spa, toerana tora-pasika any Shina
Tranombakoky ny Lamborghini, any Italia
Tsidiho ny tranombakoka Lamborghini, tranombakoka any Italia
Harlem: Toerana fiantsenana tsara indrindra
Torohevitra sy torolàlana momba ny toerana hiantsenana ao Harlem. Avy amin'ny Calle 116 ka hatramin'ny mozika angano, boky ary fivarotana Santeria.
Tour Langwaki Island, paradisa Maleziana
Nosy Langkawi, toeran-paradisa any Malezia
Androany dia hitsidika tranombakoka sasany amin'ny tantaran'ny fitsaboana isika. Andao hanomboka ny fitsidihana ao amin'ny Museum of the History of the ...
Portimao dia tanàna iray any Portugal izay any amin'ny Distrikan'i Faro, 2 kilometatra miala ny ranomasina, no ...
Ny Ranomasina Peroviana: Ny Ranomasin'i Grau
Ny ranomasina peroviana dia iray amin'ireo manankarena indrindra amin'ny planeta. Karazan-dranomasina roa no miara-miaina ao aminy, ny tropikaly iray any avaratra, ary ny rano mangatsiaka mandro ny faritra afovoany sy atsimon'ny firenena.
Alitara: Ayacuchano: Fanehoana ny kanto peroviana
Ny tsangambato Ayacucho dia iray amin'ireo fanehoana ekena indrindra amin'ny zavakanto Peroviana. Fanehoana kanto an'ny faritra Ayacucho izany
Sarontava Folkloric ao Però
Ny fenitra iray amin'ny asa tanana Peroviana dia ny sarontava, nampiasaina hatrizay hatrizay mba hampifandraisina amin'ny ...
Fauna sy Flora ao amin'ny Colca Valley
Raha handeha ho any amin'ny Colca Valley isika, dia tsy maintsy fantatsika fa ny fahasamihafana amin'ny haavony sy ny toetrandro any an-dohasaha ...
Rivers manan-danja any Suisse
Androany isika dia hahafantatra ireo renirano manan-danja indrindra any Suisse. Andao atomboka amin'ny Ony Rhine ny fitsidihana, ...
Toerana misy ny vakoka eran-tany any Azia sy Oseania
Androany isika dia miresaka momba ny World Heritage Site izay hita any Azia sy Oseania
Toerana lova eran-tany any Eropa
Eto izahay dia mamela anao lisitra mahaliana miaraka amin'ireo tsangambato rehetra izay ao amin'ny UNESCO World Heritage Site
Toerana misy ny vakoka eran-tany any Amerika Latina sy Karaiba
Androany isika dia miresaka momba ny World Heritage Site any Amerika Latina sy Karaiba
Androany dia ho fantatsika hoe iza ireo morontsiraka mampidi-doza indrindra eto an-tany. Andao atomboka ny fitsangatsanganana any Brevard ...
Inona avy ireo magazina fitsangatsanganana tsara indrindra?
Amin'ity indray mitoraka ity dia hojerentsika hoe iza ny magazine fitsangatsanganana tsara indrindra. Andao atomboka amin'ny fanonona ny National Geographic Traveler, magazine ...
Zohy ambanin'ny rano eto amin'izao tontolo izao
Amin'ity indray mitoraka ity dia hihaona amin'ireo lava-bato ambanin'ny rano tsara indrindra isika. Andao atomboka ny fitsangatsanganana any Montego Bay, Jamaika, toerana nisy antsika ...